U soo guurista Dubai - La soco Dhammaan Suurtogalka ah
U soo guurista Dubai - La soco waxkasta oo macquul ah
Published by Shirkadda Dubai City at June 21, 2019
Baro wax kasta oo suurtogal ah
DCC - Nagala soo xiriir
MAGAALADA DUBAI - I LOVE DUBAI CITY
Ku soo DHAWOOW Shirkadda Dubai City Waxaan nahay shirkad cajiib ah oo caqli badan ganacsi magaalada. Dubai City waa qurux iyo yaab meel ilaa booqasho sida dalxiis, shaqo raadiye ama xitaa waxaad bilaabi kartaa shaqo oo aad ku noolaan kartaa shaqo raadiye caalami ah. Dubai City wuxuu leeyahay wax cajiib ah qof walba.
Dubai City waa magaalo aad u wanaagsan oo la yaab leh oo soo booqda, shaqeysa oo ku noolaada. Dubai waxay u leedahay shay u gaar ah shaqo doon kasta. Waxaa intaa dheer, waad yeelan kartaa munaasabadda xigta si aad shaqo u hesho ee dalka Isutagga Imaaraatka Carabta Emirates ama si fudud u aado Magaalada Dubai? Hadday sidaas tahay markaa markale dalbo shaqooyinka gudaha UAE.
Bariga dhexe waa kan ugu fiican! Haddii aad raadinayso inaad shaqo ku hesho UAE, fadlan ka sii hadal wax badan oo ku saabsan sida aan u samayno marka la eego SHAQADA UAE - Shirkadda Dubai City , qayb ka mid ah Shirkadda Magaalada Dubai - Career Fursado. Ku biir LinkedIn maanta si bilaash ah.
Sidaas waligaa ma joogtay Dubai? Ma wadaagi kartaa waayo-aragnimadaada kharashka?
Iyadoo Dubai City Shirkadda waxaad ku biiri kartaa bogga dawliga ah ee quruxda badan iyo khibrada nololeed ee Dubai. Hadafkayagu waa inaanu dhiirrigelinno Dubai City iyo adigana waxaad arki kartaa sawirrada Dubai iyo Abu Dhabi, sawirada, goobaha, isdhaafka iyo cirka Dubai! Xaddidku waa SKY ee magaalada Dubai! Waxaan kugula talineynaa inaad la wadaagto waayo-aragnimadii aad la kulantay, wargeysyada Bariga Dhexe, sheekooyinka ku yaala UAE, codsiyada shaqada ee shirkadaha, sawirada Dubai, cajaladaha fiidiyowyada sida Sky Dubai, waxay weydiinayaan shaqooyinka Dubai, talooyin iyo xusuusin Dubai City.
Shirkadda Dubai City Mashruucan waa in lagu dhiirigeliyo aduunyada si loo ogaado qaab nololeedka magaalada Dubai, iyo in lagu faafiyo jacaylka yar ee Dubai.
Ma dooneysaa in lagugu dhiirrigeliyo UAE.
Jacaylka Shirkadda Dubai City Sida badan ayaannu u qabannaa?
Fadlan nala socodsii ..
Shirkadda Dubai City - Suuqaada ama Ganacsigaaga
Ku sii deyn Resv to CV shirkadda Dubai City ama ku toogasho linkedin
Shirkadda Dubai City | LinkedIn
Shirkadda Dubai City - Fursadaha Xirfadaha | LinkedIn
Shirkadda Dubai City - Home | Facebook
Ku noolaanshaha iyo ka shaqeynta Dubai waa riyo badan dad badan. Miyaad haysataa isla isku mid ah? Akhri si aad u ogaatid dhammaan muuqaalada ku saabsan shaqada iyo shaqooyinka Dubai.
Dubai waa mid ka mid ah toddobada imaaraad ee Imaaraadka. Waxaa xukuma amiir, taliye madaxbannaan. Waxay ku taal qaybta koonfureed ee Gacanka Faaris. Waa mid ka mid ah gobollada ugu taajirsan ee United Arab Emirates.
Dhaqaalaha Dubai wuxuu inta badan ku tiirsan yahay warshadaheeda saliida. Tani waa hodan ahaan sababta oo ah khayraadka waaweyn ee saliida. Kaydka saliidda weyn ee Dubai ayaa ka dhigtay mid ka mid ah soo saarayaasha saliidda ugu weyn dunida. Laakiin Dubai kuma salaysnayn oo kaliya saliidda dhaqaalaha. Goobtan si dhakhso ah u koraya waxay kaloo leedahay tiro badan oo ka mid ah qaybaha sida ba'an sida
Teknolojiyada Macluumaadka (IT)
Qaybaha suuqyada ee sii kordhaya ee Dubai ayaa abuuray shaqooyin badan. Shaqooyinkaas faa'iidada leh waxay soo jiidaan kumanaan shaqaale doonaya Dubai sannad kasta. Shaqooyinka waxay u baahan yihiin aqoonta saxda ah, heerka khibrada iyo sidoo kale xirfadaha Ingiriisiga ku hadla.
Aqoonta Shaqooyinka Dubai
Maxay yihiin aqoonta aad u baahan tahay inaad ku dhufatid magaalada Dubai? Fiiri.
Waxbarashada - Iyadoo machadyo waxbarasho oo dheeraad ah la dhiso maalin kasta, shaqooyinka barayaasha ayaa si joogto ah ugu koraya. Dad badan oo ka yimid dalal badan ayaa u soo guuray Dubai si ay shaqooyinkan ugu dhameeyaan. Shuruudda ugu hooseysa waa shahaadada bachelorka oo leh shahaadooyin sharafeed maado kasta. Waxaad sidoo kale u baahan tahay shahaadada AAD. Saddex ilaa afar sano oo waayo-aragnimo wax ku barasho ah oo ka jira xarun waxbarasho ayaa la door bidaa.
WAXAAD AKHRISO KALA HELO WEBSITE
Shirkadda Dubai City - Shaqooyinka Xirfadaha UAE Xirfadaha, Maalgelinta, iyo ...
Imaaraadka Imaaraadka Carabta - Xaqiiqada Dunida - Sirdoonka Dhexe ...